Ny dikan'ilay anarana Yuri. Ny misterin'i Yuri
Ny kalitaon'ny Yuri dia fahatoniana sy fifantohana, ary ny tanjona dia ny fahatsapana mendrika.
Anarana Yuri - grika novaina hoe "George", "tompon'ny tany".
Ny fiandohan'ny anarana Yuri:
Io anarany io dia tonga tamin'ny lahatenintsika tamin'ny fiteny grika fahiny. Tany am-piandohana dia nitovy tamin'i George izany, kanefa dia nisaraka izy ary lasa anarana mahaleotena. Ny razambe iray amin'ny anaran'i Yuri, ilay anarana - George, dia amin'izao fotoana izao, anarana iray mahaleo tena.
Ny toetra sy ny fandikana ny anaran'i Yuri:
Tamin 'ny fahazazany i Yuri no nihevitra sy nitony. Mahatsiaro tena izy, manararaotra ny alahelon'ny hafa tahaka ny azy ihany. Mifamatotra amin'ny ray aman-dreniny ary amin'ny lalina ao am-pony izy dia mihevitra ny tenany ho zanany eo akaikiny. Miara-mianatra anefa izy fa tsy amin'ny taonany, ka tsy manakana azy tsy handray anjara amin'ny lalao sy hanao habokana. Matetika izy ireo no matanjaka ara-batana, saingy mora sy mora foana ary indraindray - hazo fihinam-boa.
Ny Yuriev dia miavaka amin'ny fandinihana sy ny fahamendrehana, ny fisafidianana asa, tsy dia mijanona amin'ny asa izy ireo, manolo-kevitra ny fifandraisana amin'ny olona marobe, saingy miezaka ny tsy hisaraka izy ireo. Amin'ny ankapobeny, dia sisin-dàlana eo amin'ny teknolojia sy ny maha-olombelona izy ireo ary tsy maneho firindrana ho an'ny siansa. Tian'izy ireo ny hitady tsy fitoviana, ny fandinihana ny trangan-javatra ara-batana, ny fampidiran-draharaha ary ny fitsapana ny hevi-bahoaka. Ny mpikaroka marary, ny mpandeha sy ny mpisava lalana dia nahazo an'i Yuriev. Ny fahaiza-mandanjalanja ny saina dia mitaky fahalalana. Manenjika, mananatra ary vonona ny hiandry ny valiny izy ireo. Ao anatin'ireo fihetsika matetika tarihin'ny fisainana tsy mitombina, dia ampirisihina ny mpiara-miasa amin'ny fahatokisana amim-pahatsorana ny fahombiazany.
Ao amin'ny orinasa, ny mpitaona iray antsoina hoe Yuri matetika dia miankina amin'ny fahatsapany vazivazy sy ny fanalefahana ny fifandraisana. Matetika i Yuri no mena, mena ary mahafinaritra. Rehefa misy fifandonana dia manala baraka ny mpandika lalàna amin'ny teny verbal, aleony ny ady ara-pôlitika ara-batana. Na izany aza dia afaka miady ho an'ny tenany amin'ny tenany i Yuri, satria tsy matahotra ny asa mafy. Yuriev dia nankasitrahana ho mpanelanelana mahafinaritra sy mahay mandanjalanja ary manome voninahitra ny fahaiza-manaony voajanahary. Afaka mampitony ny olona izy ireo ary mametraka fahatokiana amin'izy ireo, mpampianatra mahay sy mpanolotsaina mivoaka avy amin'izy ireo. Ny mpitarika-Yuri dia mazoto mandrisika ny mpanara-dia azy.
Mety hampihemotra ny toeran'i Yuri, mahatsiravina sy mora vazivazy ratsy. Matetika izy no iharam-panenjehana tsy misy antony, fisalasalana.
Amin'ny fitiavana, Yuri dia mpanentana mahafoy tena, saingy raha mahita vehivavy iray mety aminy izy. Yuri dia tena tsara fitondran-tena, manameloka fifandraisana tsy misy fepetra, tsy misy dikany. Mankasitraka ny hatsaran-tarehy vehivavy izy, manilikilika an-tsitrapo, fa tsy mandalo velively ny sisintany. Ao amin'ny fitadiavana ny namana iray dia manam-paharetana sy maharitra, dia aleo mitokana irery fa tsy amin'ny olona rehetra. Indraindray dia mandalo, aleony "mandresy" azy, nefa miaraka amin'izay kely kokoa manafina ny vehivavy maharitra, dia manalavitra ny fisintonana. Yuri dia tia vehivavy matanjaka sy mihazona.
Yuri - ny endriky ny teny hoe "ny zava-drehetra ao an-trano." Ataovy azo antoka ny manatanteraka asa "lahy" ao an-trano, ataovy azo antoka fa manana vola foana ny fianakaviana. Raha mila manamboatra ny tranony i Yuri dia hanaraka avy hatrany izy ary tsy haharitra mandritra ny taona. Tiany ny ankizy, indrindra fa ny fitiavany ny zafikeliny. Mila mikarakara ny vady aman-janany i Yuri.
Fihetsiketsika mahaliana momba ny anarana Yuri:
Ny "fahavaratra" Yuri dia manana filôzôfôma mieritreritra, misongadina amin'ny fahakiviana sy ny hatsaram-panahy feno fitiavana. "Herinandro" sy "ririnina" - maharikoriko sy mahatsikaiky, "lohataona" - malemy, manao diplaoma tsara.
Ny fifandraisana tena tsara eo amin'ireo mitondra ny anaran'io anarana io dia miaraka amin'i Irina, Elena, Anastasia, Galina ary Natalia. Saingy miaraka amin'i Anna, Veronika ary Tatiana, matetika i Yuriev no tsy manana fanambadiana.
Anarana Yuri amin'ny fiteny samihafa:
Anarana Yuri amin'ny teny anglisy: George (George)
Anarana Yuri amin'ny teny sinoa: 尤里 (Yuli)
Anarana iombonana amin'ny teny japoney: ユ リ イ (Yuri)
Anarana Yuri amin'ny teny espaniola: Jorge (Jorge)
Anarana Yuri amin'ny teny alemà: Georg (Georg)
Anarana Yuri amin'ny teny poloney: Jerzy (Jerzy)
Anarana in Ukrainian: Юрій
Ny endrika sy ny variana amin'ny anarana Yuri : Yura, Yurasya, Yuraha, Yurash, Yurik, Yuranya
Yuri - loko ny anarana : pale manga
Ny voninkazo Yuri : lily eny amin'ny lemaka
Vato Yuri : Topaz
Inona ilay anarana hoe Petera?
Iza no anaran'i Natalia?
Iza no anaran'i Ilya?
Ambasadin'ny Vatikana ao Rosia
Iza ny anaran'i Milena?
Inona ny anaran'i Andrew
Beef Stroganoff miaraka amin'ny holatra
Toeram-pivoahana amin'ny marbra novolena
Fiaramanidina fitaratra amin'ny maraina amin'ny vavony iray foana - tsara sy ratsy
Bed of chipboard
Shampoo maina ho an'ny volo
Dikul ny sakafo
Toeram-pandriana ao amin'ny haingo-style style - endri-javatra amin'ny endriny ultramodern
Esory aminy daholo ny menaka fanatsaràna rehetra: 25 vavy izay tsy mahafantatra ny fomba handoko mihitsy!
Fandefasana efitra fisakafoanana ho an'ny lalantsara
Ahoana no hanaovana saosy saosy?
Ny vadin'i Alice Minnelli vadiny dia hita maty tao amin'ny hotely
Tendrombohitra Caucase, Elbrus